A na-enwekarị ụfụ ụkwara ume ọkụ, ebe a na Freepharma Anyị nwere ezi uche ụdị nsogbu a ma nyere gị aka igbochi ya, Anyị arụpụtara Leniart UC II, Leniart UC II Plus, Artifort. NKWU Ahụ Akpanaka? Articolar
Mgbu? Ra bụ akụkụ kachasị mkpa nke ụbọchị, N'ebe a na Freepharma Anyị nwere ezi uche ụdị nsogbu a ma nyere gị aka igbochi ya, Anyị emepụtala Keratonina Sonno & Bellezza, Melatonina Formula Relax NKWU Nsogbu ihi ụra? na-ehi ụra
E guzobere Freepharma n'ebumnuche nke nyocha, mmepe na ikesa nri nri na ngwaahịa nri.
Labolọ nyocha anyị
Labolọ ọmalịcha nke Italiantali wee kwado ya site n'aka ndị ọrụ nchekwa ahụike na nchekwa, ogo na asambodo gburugburu.
Ihe mgbakwunye anyị
100% eke na-achịkwa anyị na-eme ka nri maka ndị ahịa nwere mmetụta na igbochi ọrịa.
Ndị na-ere ahịa anyị
Can nwere ike ịchọta nri anyị na-ere ọgwụ, Parapharmacy na ụlọ ahịa dị elu, ma ọ bụ site na ndị na-ere ahịa anyị n'ịntanetị
Ọdịmma nke anya gị dị mkpa
Anyị na-eleda mkpa ọ dị ịhụ anya nke ọma kwa ụbọchị, Anyị na-emejọ anya anyị site n'ikpughere ha na mgbalị siri ike site na iji ngwa elektrọniks dị ka kọmputa na ekwentị, Anyị na-ezere itinye iko iji ghara ịdị na-eyi ejiji, anyị anaghị enye oke ibu. na mbọ ha nwere ime site na-agụ ọtụtụ awa ihuenyo komputa anyị ma ọ bụ ekwentị anyị .. na-echezọ ihe egwu nwere ike ịdakwasị anyị.
Anyi bu ihe anyi na eri
Anyị anaghị eleda mkpa ihe anyị na-eri kwa ụbọchị anya. Ọtụtụ mgbe, kama iji nri ehihie mara mma, anyị na-ahọrọ sandwich na ọetsụ carbonụ carbonated ozugbo anyị nwere ohere. Ihe ndị a niile adịghị mma maka metabolism anyị, anyị na-enweta ibu ma na-anwa ifelata, mana n’oge, mgbe ịbaghị n’ibu, anyị na-eche na anyị nwere ike laghachi azụ iri nri dị ka oge mbụ… Anyị na-eweghachi ego niile furu efu na oge.
Nutraceutics Anyị na-emepụta
Freepharma - Nduzi ndi Italia na-eduga
Anyị na-emepụta ihe ndị dị mma dị 100% na ndị na-achịkwa maka ndị ahịa na-egbochi mgbochi ọrịa.
Nlepụghị anya nke Lactose
A na-ekesa ọrụ a n'okpuru ikikere Creative Commons .